Umaki: isipiliyoni | Martech Zone
NgeSonto, ngoJulayi 13, i-2014 NgoMsombuluko, Mashi 16, 2015 Douglas Karr
Ngikwenze kahle. Yilokho ebengikucabanga nje lapho ngibona lesi sithombe esingezansi kumbiko weMediaPlant oxhaswe ngabakwaMicrosoft, amaDola, amaBits, nama-Atom: I-Roadmap to the future of Marketing. Ukubukeka okucatshangwe kahle futhi okusebenzayo kokuthi ubuchwepheshe buvela kanjani ukunika amandla amasu wokukhangisa asebenza kangcono. Umdwebo owodwa ugqamile njengoba besisiza izinkampani ukuthi zenze amasu abo wokumaketha online ngakho-ke ngiwufake ngezansi. Ukumaketha kusesimweni sokuguquka,